သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသံချဲ့စက်သံတွေနဲ့ ဆူညံနေပါသလား. . .တိုင်လိုက်ပါ. ..ဒီဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူလို့ရပါတယ် – Maharmedianews
လူက မိလ္လာဆယ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကတော့ ရွှေထုပ်တဲ့ မြပုဝါ
ငွေကြေး အဆင်ပြေချိန်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလို. …ဆင်းရဲချိန်မှာရော လက်တွေ မြဲမြဲတွဲထားနိုင်မလား?
အတူနေချစ်သူက တည်းခိုခန်းမှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်သွားတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသံချဲ့စက်သံတွေနဲ့ ဆူညံနေပါသလား. . .တိုင်လိုက်ပါ. ..ဒီဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူလို့ရပါတယ်
ဒီအဖိုးကို တွေ့ရင် ခွေလည်းဝယ် ထီလည်းထိုးပြီး အားပေးကြပါဦးနော်
March 27, 2019 March 27, 2019 admin555
အသံချဲ့စက် ဥပဒေကို ၂ဝ၁၂ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် နေ့တွင်ပြဌာန်းထားခဲ့တဲ့ ရပ်ကွက် သို့မဟုတ်ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေး ဥပဒေရဲ့ ပုဒ်မ ၁၃ ပုဒ်မခွဲ ( ဈ ) မှာ ပြဌာန်းထားတာရှိပါတယ် ။
ဥပဒေအရ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ အသံချဲ့စက် အသုံးပြု ခွင့် ခွင့်ပြု ချ က်တောင်းခံရမှာဖြစ်ပြီး ခွင့်ပြု ချ က်မရှိပဲ အသုံးပြု ပါက အရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဥပဒေ နည်းဥပဒေနဲ့ ခွင့်ပြု ရာတွင် လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းချ က်(၇)ချ က်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
( ၁ ) ပြည်သူများ အေးချ မ်းတည်ငြိမ်စွာလုပ်ကိုင်နေထိုင်မှု အား အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရ။
( ၂ ) သတ်မှတ်ခွင့်ပြု ထားသည့်အချိန် အပိုင်းအခြားအတွင်း၌သာဖွင့်လှစ်ခွင့်ရှိသည်။
အချိန်ကျော်လွန်၍ မဖွင့်လွှစ်ရန် ( အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်နေရာများဥပမာ_စာသင်ကျောင်းအနီး၌ဖြစ်ပါက စာသင်ချိန်များကို ထိခိုက်မှူ မရှိစေဘဲစိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း
ဆေးရုံအနီး၌ဖြစ်ပါကလူနာများ စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရေး(သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချ က်များကိုမဆန့်ကျ င်စေဘဲစိစစ်ခွင့်ပြုခြင်း )
(၃) ခွင့်ပြု ထားသည့် ရက်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်စေရမည်။
(၄) ခွင့်ပြု ထားသည့် နေရာ၌သာဖွင့်လှစ်ရန်။
( ၅ ) အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာတို့ကို ထိခိုက်စေသော ဂုဏ်သိက္ခာကျ ဆင်းစေသောအကြောင်းအရာများဖွင့်လှစ်ခြင်းမပြု ရန်။
( ၆ ) တာဝန်ရှိသူများမှ အခါအားလျော်စွာ စစ်ဆေးမှူကိုခံယူလိုက်နာရမည်။
( ၇ ) ဤအမိန့်ကို လိုအပ်ပါက အချိန်မရွေးပြန်လည်ရုပ်သိပ်ခြင်းခံရမည်။
၄င်းအထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များအပြင် ခွင့်ပြု ချ က်တောင်းခံရာတွင်
(က) ခွင့်ပြု ချ က်ကို ၃ ရက်ကြို တင် တောင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ခ) ပုံမှန်အားဖြင့် နံနက် ၆ နာရီမှ ညနေ ၉ နာရီအထိသာခွင့်ပြု ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) အများပြည်သူများအား အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေရးအတွက်ခွင့်ပြု သည့်ဥပစာအတွင်း အများပြည်သူကြားသိရုံမျှ သာ ဖွင့်ဖို့ ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဤခွင့်ပြု မိန့်ကို ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများမှ သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းသို့ ကော်ပီတစ်စုံပို့ရတဲ့အတွက် နားမခံသာပါက သက်ဆိုင်ရာစရဲခန်းသို့တိုင်ကြားပါ။
သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် / မြို့ နယ်ရဲစခန်းမှ အထက်ပါ စည်းကမ်းချ က်များနှင့် ညီ မညီပြန်လည် စစ်ဆေးအရေးယူပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရေးမယူပေးပါက ၄င်းရဲစခန်းမှတာဝန်ရှိသူများအား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းနယ်ပြည်နယ် ရဲစခန်းကို ထပ်ဆင့်တိုင်ကြားသင့်ကြောင်း အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်။
Myanmar New Days.
← ဒီအဖိုးကို တွေ့ရင် ခွေလည်းဝယ် ထီလည်းထိုးပြီး အားပေးကြပါဦးနော်
အတူနေချစ်သူက တည်းခိုခန်းမှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်သွားတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး →
March 31, 2019 admin555 Comments Off on လူက မိလ္လာဆယ်တဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်နေပေမယ့် စိတ်ဓာတ်ကတော့ ရွှေထုပ်တဲ့ မြပုဝါ
မော်လူး မတ် ၂၉ လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲကျော်ခန့်က အိမ်သာတက်စဉ်မိလ္လာတွင်းသို့ လွှတ်ကျပျောက်သွားသော အလေးချိန် ၅မူးသားကျော်ခန့်ရှိ ရွှေလက်စွပ်တစ်ကွင်း မိလ္လာဆယ်ယူစဉ် ပြန်လည်တွေရှိ၍ ပိုင်ရှင်ထံ အပ်နှံပေး စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အင်းတော်မြို့နယ် မော်လူးမြို့မင်းဇေယျာရပ်ကွက် နေအိမ်အတွင်း၌ မတ် ၂၉ရက်နေ့ ည၇နာရီခွဲ
March 27, 2019 admin555 Comments Off on ငွေကြေး အဆင်ပြေချိန်မှာ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသလို. …ဆင်းရဲချိန်မှာရော လက်တွေ မြဲမြဲတွဲထားနိုင်မလား?
March 27, 2019 admin555 Comments Off on အတူနေချစ်သူက တည်းခိုခန်းမှာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်သွားတာကို ခံလိုက်ရတဲ့ ၁၇ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး
March 27, 2019 admin555 Comments Off on သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အသံချဲ့စက်သံတွေနဲ့ ဆူညံနေပါသလား. . .တိုင်လိုက်ပါ. ..ဒီဥပဒေတွေနဲ့ အရေးယူလို့ရပါတယ်
March 27, 2019 admin555 Comments Off on ဒီအဖိုးကို တွေ့ရင် ခွေလည်းဝယ် ထီလည်းထိုးပြီး အားပေးကြပါဦးနော်
ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲ လွမ်းတသတသဖြစ်နေဆဲ သဘာဝမင်းသား ဒွေး အကြောင်း
March 26, 2019 Wordpress Myanmar Comments Off on ဒီနေ့ ဒီအချိန်ထိ ပရိတ်သတ်တွေရင်ထဲ လွမ်းတသတသဖြစ်နေဆဲ သဘာဝမင်းသား ဒွေး အကြောင်း
“မြန်မာနိုင်ငံက သမိုင်းဝင် ကမ္ဘာကျော် လမ်းမကြီးများ”
March 26, 2019 admin555 Comments Off on “မြန်မာနိုင်ငံက သမိုင်းဝင် ကမ္ဘာကျော် လမ်းမကြီးများ”
ပြည်သူတွေက ၀က်သားကို ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရ ပေမယ့် မွေးမြူရေးသမားတွေက ရှုံးနေတယ်… အထုပ်ကြီးပိုက်သွားသူက ဘယ်သူတွေလဲ
March 26, 2019 admin555 Comments Off on ပြည်သူတွေက ၀က်သားကို ဈေးကြီးပေးဝယ်စားနေရ ပေမယ့် မွေးမြူရေးသမားတွေက ရှုံးနေတယ်… အထုပ်ကြီးပိုက်သွားသူက ဘယ်သူတွေလဲ
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် တို့ရဲ့ မင်္ဂလာ ညစာစားပွဲပုံရိပ်များ
March 26, 2019 admin555 Comments Off on မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလုံးသမား အောင်သူနဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုးအိအိခန့် တို့ရဲ့ မင်္ဂလာ ညစာစားပွဲပုံရိပ်များ
မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ဦးကို လက်ထပ်ဖို့စည်းရုံးပြီး တရုတ်နိုင်ငံခေါ်သွားရန် စီစဉ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသားများအားဖမ်းဆီး
March 26, 2019 admin555 Comments Off on မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ဦးကို လက်ထပ်ဖို့စည်းရုံးပြီး တရုတ်နိုင်ငံခေါ်သွားရန် စီစဉ်သည့် တရုတ်နိုင်ငံသားများအားဖမ်းဆီး